Isi nri maka ụmụaka | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akwụkwọ: Nri maka ụmụaka
Kedu esi esi nri pasta na ngwa ngwa ngwa nri?
Kedu esi esi nri pasta na ngwa ngwa ngwa nri? Iji sie nri na ngwa ngwa na-esi nri, ọ dị mkpa ka ị wụsa abụọ spoons nke butter ọ bụla na ngwaọrụ (nke onye nnabata nwere mmasị) ma gbanwee mmiri ara ehi porridge mode. Chopped eyịm mkpa ...
Ọ bụ semolina bara uru?
Semolina ọ bara uru? Ọ bara ezigbo uru ... ọ bụrụ na nri ọ bụla dị na bọket. nke ahụ dị njọ. Na 200 gr. na Semolina ụbọchị dị mma. Ohere ọka semolina dị mma ka ọ dị njọ? Ndị ọkachamara n'ihe banyere nri na-aza ...
Ezi ntụziaka maka ọnwa 6 nwa
Ezi ntụziaka maka ọnwa 6 nwa m onwe m dị ụnyaahụ malitere ịba. Sonnul 6mes. Sliced ​​zucchini finely, kpuchie na mmiri esi, kpuchie mkpuchi na esie ya 20-25 mines n'elu obere okpomọkụ. Mgbe ahụ ...
Kedu otu m ga esi esi zụọ nwa na ọnwa 10?
Kedụ ka m ga-esi nye nwa n’ime ọnwa iri? A na - enye nri mgbe niile http://kuking.net/10.htm Anyị bụ ọnwa iri, dọkịta ahụ kwuru na mmiri ara ehi bụ naanị mgbe otu afọ na ihe ọ juụ tooụ kwa. Anyị na-eri nri - puree inine (m na-esi nri ...
Esi mee mmiri cheese na mmiri ara ehi
Esi mee mmiri cheese na mmiri ara ehi mmiri ara ehi. Mgbe ahụ, gbanye ihe miri emi, kpuchie ya na gauze dị ọcha, wukwasi mmiri ara ehi na mmiri ara ehi n'ime ya, hapụ ya ma hapụ ya ka ọ gbanye ya.
Kedu ihe kacha mma maka nri abalị? Kedu nri dị maka nri abalị?
Kedu ihe kacha mma maka nri abalị? Kedu nri dị maka nri abalị? Naanị kefir. Ọ na-enyere ọtụtụ aka. Maka nri abalị, i nwere ihe dị mkpa, nri protein, azụ ma ọ bụ anụ na ...
Nwa 2 nke afọ, na-eri nri, anaghị enye aka ịkwado efere, ihe ị ga-eme?
Nwa 2 nke afọ, na-eri nri, anaghị enye aka ịkwado efere, ihe ị ga-eme? Nwunye m anaghị eri nri na ụlọ akwụkwọ ọta akara, o juru ya anya na mmụọ nsọ gị na-enye nri ebe ebe ike si ...
Kedu ihe bụ fatty acid mono-diglycerides? Biko kọwaa n'ụzọ zuru ezu!
Kedu ihe bụ acid acid-diglycerides? Biko kọwaa n'ụzọ zuru ezu! Fatty acid mono - na diglycerides na-eme ka ndị na-ejigide ihe ndị mmadụ na-ejesi ike na iji melite viscosity na ịdị n'otu nke ngwaahịa nri. Ọzọkwa…
Kedu otu esi eme ihe ntanba?
Kedu otu esi eme ihe ntanba? Berry fousse na 1 semolina iko nke 1 tomato Art. ngaji semolina 0,5 iko mmiri 1 Art. Ngaji shuga Na-asacha, akọrọ na afanyekwa. Marc wunye ...
Kah na-esi nri n'ụlọ iji esi nri muesli?
Kah na-esi nri n'ụlọ iji esi nri muesli? E nwere otu bara uru na tọrọ ụtọ uzommeputa! Nke mbụ, ị na-ewere otu iko oatmeal, wụsara ha mmiri mmiri, mgbe 4 nkeji ị na-etinye walnuts (ezigbo chopped), tomato! ...
esi esi nri porridge
Esi esi nri semolina porridge Ọ dịghị ihe mgbagwoju anya. Nri semolina malitere n'eziokwu na na mbụ, a na-etinye obere mmiri n'ime pan. A na-agbanye mmiri ka mmiri ahụ ghara ịcha. Ọbụna mgbe ha obụpde ...
esi esi nri esi nri chocolate
Etu esi esi ofe mesi esi ofe chokokere nma .. O di nma igbakwunye Michapu marmalade n’ebe ahu. Mgbe ah. mgbe mwara, ọ mara mma nke ukwuu (ma dịkwa ụtọ) Elekere 1 tablespoon nke koko zuru oke kuki (M jiri “jubilii”) 400 g Chocolate…
Kedu ihe a ga-akwadebe 8-9 ọnwa nwa ???
Kedu ihe a ga-akwadebe 8-9 ọnwa nwa ??? boobs kacha mkpa TITLE !!!! Ị nwere ike inye efere abụghị ihe na-esi ísì ụtọ, poteto mmiri na-acha mmiri mmiri, anụ a kụrụ agwa, ma ọ bụrụ na ị nwere ike iri ezé gị na obere iberibe. M ata ata ...
esi ghọta "1/4 iko mmiri ara ehi" bụ ego ole ịgbakwunye?
esi ghọta "1/4 iko mmiri ara ehi" bụ ego ole ịgbakwunye? Ọ bụrụ na ọ na-esiri gị ike nghọta, were were iko zuru ezu wụsa ya n'ime iko abụọ otu nha, kesaa otu iko otu ugboro ọzọ site na ...
Kedu ihe nwere ike ịtọ ụtọ ma na-atọ ụtọ ịkụzi nwatakịrị site na ọkụkọ ọkụkọ?
Kedu ihe nwatakịrị ga-eji fillet anụ ọkụkọ na-atọ ụtọ? Mee nwa gị pizza na fillet ọkụkọ ma ọ bụ sandwich na-atọ ụtọ, jiri akwa na akwụkwọ nri chọọ ya mma - ọ ga-amasị ya :) Souffle (anụ, ọkụkọ, ...
Ụmụaka ole na ole ka ha nwere ike iri nri na ihe ọ bụla?
Ụmụaka ole na ole ka ha nwere ike iri nri na ihe ọ bụla? Kwụsị otu afọ ahụ ka ọ nwere ngwaahịa ndị ọzọ, persimmon bụ otu ụdị nri ma ọ bụghị ...
Esi esi esi nri na mmiri ara ehi?
Esi esi esi nri na mmiri ara ehi? Esi esi nri porridge Esi esi nri porridge Nri porridge nwere ihe nke ya. A na-esi na-esiri ihe ndị e ji esiji ya rụọ, nke na-eme ka ọ dị ọcha, nke mmiri mmiri na nke dị ọcha. The agbanwe agbanwe nke porridge dabere na ruru nke ọka ...
kedu ihe mere semolina
site na ihe mere semolina wheat Semolina (colloquially # 769; nka) wheat wheat zuru oke na onu ogugu ihe ntanite site na 0,25 ruo 0,75 mm. Mere si durum wheat (ọkwa T) ...
Gịnị nwere ike esi nri delicious unere, obi cheese ...?
Kedu ihe ị ga - esi sie unere dị ụtọ, akwa chiiz ...? - 2 ngwugwu nke obi chiiz - 2 àkwá, - 4 tbsp. tablespoons shuga - 1/2 teaspoon nke nnu - 1/2 teaspoon nke ntụ ịme achịcha. - ...
ihe bụ sauté na etu esi esi ya esi
Gịnị bụ sauté na ka esi akwadebe ya site na eggplant sate: eggplant, yabasị, sl. ose, karọt, tomato, nnu, shuga, ose, l. mpempe akwụkwọ. ihe niile dọrọ. Na-eri nri sote-akwukwo nri, ihe a na-egheghe eggplant stomatami ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,460.